Inkampani Buderus - nomakhi abaziwa umhlaba wonke nabaphakeli Ukushisa imishini, ukulawula isimo sezulu kanye izingxenye zawo. Kuze kube manje, uhlu imikhiqizo kuhlanganisa igesi, uketshezi uphethiloli kanye okuqinile fuel boilers "Buderus" (babo Izibuyekezo omuhle kakhulu), boilers, radiators,-solar futhi kuhlanganiswe izitshalo amandla. Ukusebenzisa imishini German - yonga amandla, kunciphise nezindleko yokusebenza nezinzuzo zemvelo.
Namuhla inkampani kuyinto nomkhiqizi Buderus ugesi technology uthathé ukuma namandla emakethe e-Europe, Russia nase-Ukraine. It yasungulwa ngo-1731 IV Buderus esekelwe esizindeni isitshalo wahlanganyela ekusakazeni bese waphonsa yensimbi kusukela 1707. Siyabonga emigomweni efanele kanye isiqondiso sochwepheshe zalesi sihlahla ngokushesha ikhula ngesivinini minyaka yonke kunilethele injabulo nezinto ezintsha, ngaphezu ngcono eyenziwe ukupheka Ukushisa izitofu :
Ngo-1895-ke wafakwa ukukhiqizwa (Ukusakaza) ka boilers kwesigamu.
Ngo 1898 inkampani wathola igunya ukwenziwa boilers Sectional, liye umkhankaso ukukhiqizwa cast iron radiators.
Ngo-1913 yena wandisa ububanzi Ukushisa imikhiqizo.
Ngo-1918 wakha bafakwa ukukhiqizwa ngowokuqala ketshezi-fuel boilers "Buderus", ukubuyekezwa zazo wandizela phezu nengxenye yeYurophu.
1927 - waqala ukukhiqizwa radiators steel.
1936 - inkampani ukhiqiza okuqinile fuel kubhayela "Buderus" amandla okusezingeni eliphezulu amalahle.
1958 kwaba ukuqala ukukhiqizwa for ifektri cast iron kubhayela nge hot isitoreji amanzi umsebenzi.
1969 - inkampani kunyatheliswa le boilers lokuqala igesi ngamalahle "Buderus" emakethe.
1981 - ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa cast iron Sectional boilers.
1992 - isendalini kwakukhona udonga-agibele amahhashi kubhayela "Buderus".
Izinhlobonhlobo fuel Ukushisa kubhayela uhlobo
Kuze kube manje, imishini Ukushisa umkhakha ngempela athuthukile. Ukuze ekhaya nasezimbonini ukusetshenziswa boilers uphiwa ezintathu ongakhetha: igesi, amafutha liquid tverdotovlivye (uhlobo fuel esetshenziswa), phansi noma udonga (indlela obandayo).
Negesi "Buderus" boilers kuthiwa bafuna kakhulu emva futhi ethandwa. Lokhu ulungisiswa ukutholakala "fuel blue" uquqaba sabantu. Negesi boilers ekhiqizwa ngaphansi kwalesi brand ihlukaniswa ngokukhuphula umthamo kanye nokusebenza.
Solid fuel kubhayela "Buderus" usebenzela zokubasa okuqinile, ezifana zamalahle, futhi namanje ziphoqa ngenxa nokusebenza ngendlela okusezingeni eliphezulu.
Okokhelekayo uwoyela boilers egijima ku-diesel, bakhiphe elezinga eliphansi eziphawulwe ngenhla okunzima ukuthandwa, nakuba umthamo omkhulu. Ngokuvamile, lezi onobuhle zinama-sikaphalafini overpressure futhi automatic elawula uhlelo nge sezulu automatics.
"Buderus" igesi boilers. incazelo Jikelele izinzuzo ngezigaba
Negesi Ukushisa kubhayela "Buderus" ezifunwayo ekhaya ngenxa nokusebenza ngendlela, ukuphepha kalula ukuphathwa. onobuhle okunjalo akubizi futhi ayatholakala enkonzweni. Izinzuzo esemqoka ukuthi le gesi boilers emamaki German zihlanganisa:
Ubukhulu Compact, ezobeka kubhayela kuphi.
Ukufaka okulula, ukugcinwa kanye nokuphathwa.
ukonga eNkulu petrol.
Isihlobo indawo kanye indlela yokufaka Buderus inkampani inikeza izinhlobo ezimbili boilers: phansi futhi udonga. Kubalulekile ukusicabangela lesi lapho ukhetha imishini, njengoba eshiwo ipharamitha kuncike ngqo kanjani ukushisa kuyoba ekhaya lakho.
boilers Outdoor asetshenziswa izitshalo kubhayela azimele wodwa, banalo ikhono eliphezulu, ngakho-ke isetshenziselwa amalahle ezindaweni ezinkulu. Buderus nkampani inyathelisa uhla ongaphandle boilers igesi ngamalahle Logano.
Wall model amandla icwecwe futhi ongaphakeme. Basuke efakwe ngqo ekamelweni evuthayo isetshenziselwa izindlu ezincane noma ezindlini. Kunamaphuzu amaningana ekhiqizwa odongeni igesi boilers Buderus inkampani ethulwa Logamax umbusi.
boilers ongaphandle uchungechunge Buderus Logano
Lokhu uhla boilers zihlukaniswa nokwenza kwayo - phansi. Lalihlanganisa uchungechunge igesi, boilers okuqinile futhi Buderus ushintsha uba yileli. Yiziphi izinzuzo lolu hlobo Ukushisa imishini?
Uhlelo ezishintshayo evumela umshini ukuba usebenze ikumodi umnotho.
usayizi Ihlangene futhi design ergonomic, isiqalo semi-automatic.
Ukufaka okulula futhi uhlale umuhle.
Hhayi kokuba ukusebenzisa ukwanda lokushisa divayisi link reverse.
Ukuba khona amapayipi ukuxhuma ethangini amanzi heater.
Amandla boilers phansi lokhu brand zokhahlamba kusuka 12 kuya 19.200 kW, kuye ngohlobo lomshini. Ngenxa yalesi phansi boilers "Buderus", okuyinto libuyekeza omuhle kuphela iyona ehola Ukushisa imishini.
boilers negesi phansi Buderus Logano
boilers negesi phansi abe nekghono eliphezulu futhi ekushayweni eliphansi zasebenza, anezici kakhulu, qualitative okuthembekile. amadivaysi sici ukuthi ukusebenza ngisho at ongaphakeme igesi supply. Zenziwa cast iron noma insimbi engagqwali, ungqimba ukugqwala ukumelana embozwe ngaphakathi. With ezahlukene ukukhetha Buderus Logano Boiler ulula.
boilers Solid phansi Buderus Logano asetshenziswa ukufudumeza izakhiwo ezinkulu futhi izakhiwo. Ngokuvamile, basuke ogibele Woodworking umkhakha ukusetshenziswa izinkuni imfucuza uphethiloli. Endaweni yokuqala uzinake high imishini. Futhi, okuqinile fuel boilers kukhona imvelo futhi ukonga izindlela, kulula ukufaka kanye nokugcina, nomthamo omkhulu. Sekungamashumi eminyaka INcwadi Yonyaka ziye zasetshenziswa ngempumelelo Ukushisa izikole, izibhedlela, zokuhlala kanye nezakhiwo zokuqondisa.
Design izici okuqinile fuel boilers
Lolu hlobo kubhayela ingasetshenziswa njengenhlangano ezimele ahlukene iyunithi akancike elisebenza uphethiloli okuqinile. Kungaba lonke uhlelo amadivayisi axhunyiwe ukuthi ukusebenzisa on ezahlukene nophethiloli. Solid fuel boilers axhunyiwe igesi kanye diesel. Nakuba luqoqwe ngokugcwele izimo zokuphepha umlilo: ihlanganiswe ukushisa kuvimbela okweqile kohlelo bafudumale futhi valve-thermostat igcina izinga lokushisa ekamelweni, ukuhlinzeka inguquko abushelezi imodi eyodwa kuya kwenye.
Uchungechunge odongeni ukukhwezwa boilers Buderus Logamax
Wall-ezazilengisiwe sathi boilers "Izibuyekezo Buderus 'ngokuthi ngubani ukukhangisa engcono, namuhla isimo umholi Ukushisa imishini yokwakha izindlu ezincane, emafulethini, Cottages. Umugqa kuhlanganisa ushintsha uba yileli boilers Logamax negesi boilers, udonga-agibele amahhashi. inzuzo yabo eyinhloko - compactness. Ukuze ukufakwa kwabo kudinga isikhala kancane, ngokuyisisekelo basuke agibele amahhashi ngqo ekamelweni evuthayo. Yebo, futhi ukuphathwa, abasakwazi elula.
ushintsha uba yileli boilers Wall-agibele amahhashi
Ngenxa ukwanda intengo gqwa igesi ukufingqa boilers sekuthandwa kakhulu futhi ethandwa. Izinzuzo esemqoka kulolu hlobo Ukushisa imishini - nobungane kwemvelo, ukusebenza kahle kanye nokusebenza okusezingeni. Ngenxa owodwa wesifunda noma ezimbili-wesifunda heater usebenzisa amandla fuel combusted ngaphakathi, ngokulandelana, ukunciphisa ukusetshenziswa yayo. Ngaphambilini, le boilers babengenalo ngempumelelo njengoba amandla equkethwe umusi and qeda imikhiqizo amandla omlilo azisetshenziswa ngaso sonke. Nge ukuthuthukiswa entsha iqoqo nokusebenzisa amandla ingenye nemisebenzi boilers ushintsha uba yileli, esinikela nabo ezingeni lelisetulu nekghono. Yini enye wazibonakalisa ithandwa kangaka? Ushintsha uba yileli kubhayela "Buderus" - intengo esamukelekayo (azungeze 870 euro), kanye izinga kuyahlangabezana nezindinganiso European! Mhlawumbe lokhu kusho konke.
Wall ukukhwezwa gas okokubilisa "Buderus» Logamax uchungechunge - yidivayisi esiwusizo futhi Ukugunda othole isicelo kuwo wonke efulethini Ukushisa, isifunda amalahle ezindaweni ezincane (kokubili zokuhlala kanye nehhovisi).
Buderus inkampani has sihlose eziningana ngesikhathi ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa imishini yayo. Akukhona nje kuphela nokwethenjelwa izinga. Omunye izakhiwo liyithuluzi esisebenzayo. Ngokwesibonelo, udonga-agibele amahhashi igesi boilers Buderus Logamax ifakwe ukushisa kanye impeller, ijubane okuyinto incike inani ukusetshenziswa kwamanzi ashisayo. Izungezisa, ke ulawula warmers, kanjalo lokushisa amanzi ashisayo inakekelwa kwelinye izinga, kungekho ngokweqile petrol.
Ibhethri Solar kuleli zwe: ukufakwa, incazelo kanye nokubuyekeza. Street ikhanyisa solar engadini sikagesi
I5 Processor ka 2500: ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nokubuyekeza
Indlela ukususa isitifiketi zokuphepha iphutha-Web site, ikhumbula yesistimu yokusebenza?